Daacish: Ninkii “soomaaliga” ee weerarkii Beljim fuliyey annaga ayuu naga tirsanaa | Somaliska
Kooxda mayalka adag ee la baxday dowladda Islaamiga ah ayaa shaaca ka qaaday in ninkii soomaaliga ahaa maalmo ka kor ka fuliyey weerarka uu ka mid ahaa kooxaha taabacsan. Hadal ay soo dhigeen bartooda ay ku leeyihiin internet-ka ayey ku sheegeen in ninkaasi ka mid ahaa weerarkaasina fuliyey.
Ninkan soomaaliga ah ee da’diisu tahay 30 jir ayaa wuxuu maalintii jimcaha beegsaday koox askar ah meel ilaalineeysay, waxaa uu ku weeraray mindi isagoo nin ciidanka ka mid ah dhaawac u geeystay. Soomaaliga ayaa warbaahinta dalkaasi waxaa ay sheegtay in qaxootinimo ku yimid dalkaasi sanadkii 2004-tii. Sidoo kale wuxuu dhalashadda dalkaasi qaatay sanadkiii 2015-kii, waxaana ay ku qaadatay muddo aad u dheer.Booliska waxaa ay sheegeen in uusan ka mid aheyn ragga indha lugu hayey ee ammaanka dalkaasi looga cabsi qabo. Soomaalida taqaanayna waxeey ku tilmaaneen inuu ahaa qof caadi ah oo aan arrimahaasi looga maleeysan karin.
Ma ahan soomaaligii ugu horeeyey ee dunida galbeedka ku sugan oo kooxdan ka tirsan islamarkaasina fuliyey weeraro. Dalka Mareykanka ayey sanadkan gobolka Ohio waxaa jaamacad ku taala weerar ka fuliyey arday la sheegay inuu jaamacadaas dhiganayey. Sidaas si lamid ah ayaa dhalinyarro badan oo dunida galbeedka ku nool waxaa ay ku biireen kooxdaas argagaxiso oo u hayaameen dalka Suuriya oo qeybo ka mid ah maamulaan.